Retail Marketing ဘာလဲ … ဘယ်လဲ? – Pyae Nyein Lu
Pyae Nyein Lu
I amapassionate marketer.
Retail Marketing ဘာလဲ … ဘယ်လဲ?
Retail Marketing ဆိုတာ ရောင်းအားကောင်းစေရန်အလို့ငှာ မိမိဆိုင် (အရောင်းနေရာ) ကိုသိအောင်လုပ်ခြင်း၊ မိမိဆိုင်မှာပဲ ဈေးဝယ်သူမှ အမြဲတမ်းဝယ်ဖြစ်စေရန်ကြိုးစားခြင်း၊ မိမိဆိုင်ရှိကုန်ပစ္စည်းများကို အရောင်းမြှင့်တင်ခြင်းကို ဆိုလိုပါတယ်။ Retail Marketing အခြေခံသဘောတရားတွေကိုတော့ First Comment မှာ Link ပြန် Share ပေးထားပါတယ်။ ဒီအခြေခံကိုနားလည်တာအပြင် Trend တွေကို သိလာဖို့လိုလာပါတယ်။ Trend တွေက ဘယ်ကို ဦးတည်နေသလဲပေါ့။
Trend ဘက်ကိုကြည့်လိုက်ရင် တော်တော်လေး မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ကို ပြောင်းလဲနေတာကို အားလုံးပဲ သတိထားမိမယ်ထင်ပါတယ်။ သိပ်အများကြီးလိုက်မပြောဘူးဆိုရင် အဓိကအားဖြင့် (၃) ခု ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ ခန့်မှန်းမိပါတယ်။
၁) Physical Store တွေ ပြန်ခေတ်စားလာမယ် …
အားလုံးတွေ့မြင်နေရတဲ့အတိုင်း Online Shopping Site တွေ Facebook Online Shop တွေ တော်တော်လေး ခေတ်စားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ Online Shopping Trend တော်တော်လေး တွင်ကျယ်လာခြင်းနဲ့အတူ အခုဆိုရင် Online Shop တွေ Offline မှာလည်း ဆိုင်ခွဲတွေဖွင့်လှစ်ပြီး In-store Experience ကောင်းတွေ မိမိတို့ ဈေးဝယ်သူတွေကို ပေးဖို့ ကြိုးစားလာကြပါတယ်။ Online to Offline သာမက Offline to Online ဆိုသလို Retail Sector ရဲ့ အပြောင်းအလဲတစ်ခုကို မြင်ရတာပါ။ လက်ရှိအချိန်မှာပဲ Offline က Supermarket ကြီးတွေလည်း Online မှာ ရောင်းချလာဖို့ အလားအလာတွေလည်း မျှော်လင့်လို့ရပါတယ်။
Marketer တွေကတော့ ထုံးစံအတိုင်းပေါ့ … O2O တို့ Integrated Marketing Communication တို့ နေ့တိုင်း စဉ်းစားရပါတော့မယ်။ Online ကလုပ်ချင်တာလုပ် Offline က သွားချင်တာသွားဆိုတာတွေ နားလိုက်ပါတော့။ တစ်သားတည်းကျပြီး မဟာဗျူဟာမြောက်တဲ့ Communication Strategy (360’ ဆိုလား 😀) တွေနဲ့ ဈေးကွက်ကို ခင်းကျင်းကြပါတော့မယ်။ ဈေးဝယ်သူတွေအတွက် ရွေးချယ်စရာပိုများလာတော့မယ့် အခြေအနေမှာ ကိုယ့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကိုပဲ သစ္စာရှိရှိလက်တွဲသွားဖို့ နည်းမျိုးစုံနဲ့ကြိုးပမ်းလာကြတော့မှာပါ။ In-store Shopping Experience ကောင်းဖို့လည်း လုံးဝ မေ့လို့မရပါဘူး။
နောက်တစ်ခုကတော့ Supply Chain Delivery ကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်တဲ့ (Logistics ကောင်းကောင်းနိုင်နင်းတဲ့) Company တွေ ဈေးကွက်ကို ဦးဆောင်ပါလိမ့်မယ်။ Free Shipping တွေကိုဦးတည်တဲ့ Promotion Activity တွေ ခေတ်စားလာမယ်လို့ ထင်ရပါတယ်။
၂) App ဆိုမှ App ပဲ …
Tech Company တွေ များပြားလာခြင်းနဲ့အတူ Mobile Shopping App တွေ ပိုမို များပြားလာလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ရပါတယ်။ Banking Sector တိုးတက်လာခြင်းကြောင့် Payment ပိုင်းမှာ ပိုမိုတွင်ကျယ်လာခြင်းကနေ ၀ယ်ယူမှုပုံစံတွေ ပြောင်းလဲလာနိုင်ပါတယ်။ အခုတော့ Cash on Delivery (ပစ္စည်းလာပို့မှ ပိုက်ဆံရှင်း) က ခေတ်အစားဆုံးပေ့ါ။
Marketer တွေကတော့ UX (User Experience) တို့ UI (User Interface) တို့ စတဲ့ အခြေခံလေးတွေကို မမေ့လျော့နေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဈေးဝယ်သူအတွက် သူတို့ရဲ့ Buying Journey ကို အကောင်းဆုံး အထောက်အကူဖြစ်စေမယ့် Shopping App လေးတွေကတဆင့် ရိုးရှင်းလွယ်ကူပြီး သုံရလွယ်ကူတဲ့ App ပုံစံကို ဖန်တီးရင်း ဈေးဝယ်သူတွေနဲ့ အကောင်းဆုံး နီးစပ်အောင် ကြိုးစားရပါမယ်။ ယခင်လုပ်နေကြ Offline မှာသုံးနေတဲ့ ATL Ad (Above The Line Advertising) တွေ၊ တချို့ BTL Ad (Below The Line Advertising) တွေ၊ email Marketing တွေထက် (တို့ဆီမှာ လူတွေက email မှ မဖတ်ကြတာနော် 😀) In-app Promotion Activity တွေကနေ ဈေးဝယ်သူတွေနဲ့ Engage လုပ်လာကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Customer Service အတွက် AI (Artificial Intelligence) တွေကတဆင့် ကြိုးပမ်းတာတွေ ပိုမိုမြင်တွေ့ရဖို့ရှိပါတယ်။
၃) Data! Data! Insight! Insight! ဆိုတဲ့ စကားလုံးတွေ တွင်တွင်ကျယ်ကျယ်ကြားရမယ် …
တိုးတက်လာတဲ့ နည်းပညာတွေကတဆင့် ဈေးဝယ်သူတွေရဲ့ Data တွေ ပိုမိုသိရှိလာကြပါလိမ့်မယ်။ ဘယ်သူတွေဝယ်နေတာလဲ? ဘယ်သူတွေက မ၀ယ်တော့တာလဲ? ဘာဝယ်တာလဲ? ဘယ်အချိန်ဝယ်တာလဲ? ဘယ်လိုဝယ်တာလဲ? စတဲ့ Data မျိုးတွေကို နည်းပညာအကူအညီနဲ့ လွယ်ကူစွာသိရှိလာကြပါလိမ့်မယ်။
Marketer တွေကတော့ ဈေးဝယ်သူတွေနဲ့ တကယ့်ကို နီးနီးစပ်စပ်တစ်သားတည်းကျစေမယ့် Campaign တွေ Product Offer တွေနဲ့ ပွဲထွက်လာကြတော့မှာပါ။ Data ကို ကောင်းကောင်းကစားနိုင်တဲ့ Marketer တွေပဲ ဈေးကွက်ထဲမှာ ပန်းပန်ကြမှာပါ။ Management ဘက်က Data မရှိပဲ ဘာမှလာမပြောနဲ့ဆိုတာတွေလည်း မြင်ရကြားရဦးမှာပါ။ အဲတော့ Data ရရှိနိုင်ဖို့ Data ကို ကောင်းကောင်း သိရှိနားလည်ဖို့တွေအပြင် အသုံးချဖို့အထိ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
Trend တွေကတော့ ပြောင်းနေဦးမှာပါ။ ဒါကတော့ စာရေးသူရဲ့ အမြင်သက်သက်ဆိုတော့ သုံးသပ်ထားမိတာလေးတွေရှိရင်လည်း Comment Box မှာ Share လုပ်သွားပါဦး။ အမြင်ချင်း ဖလှယ်ကြတာပေါ့ …
“Marketing isarace withoutafinishing line” ~ Philip Kotler
မဟာဗျူဟာမြောက်စဉ်းစားတွေးခေါ်နိုင်စွမ်းကို တိုးတက်စေမည့် နည်းလမ်းများ
Digital ခေတ် ဈေးဝယ်ခြင်းအတွေ့အကြုံကောင်းဆိုတာ